အကောင်းဆုံးဥရောပရထားလမ်းကြောင်းများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အကောင်းဆုံးဥရောပရထားလမ်းကြောင်းများ
သငျသညျပါတယ်ပြီးတာနဲ့ အတှေ့အကွုံ သက်သာ, မီးရထားခရီးသွားလာ၏အဆင်ပြေစေရန်နှင့်အထွေထွေအံ့ဘွယ်သော, ဘဝတစ်ခက်ခဲပြန်လာ pre-ရထားလမ်းဖွင့်. ကျနော်တို့နွေရာသီအတွက်အကောင်းဆုံးဥရောပရထားလမ်းကြောင်းများအကြောင်းပြောနေတာပါတယ်အထူးသဖြင့်လာသောအခါ. အတူထုပ်ပိုးတစ်ဦးကတိုက်ကြီး သာယာလှပလမ်းကြောင်းများ, အံ့သြဖွယ်ရှုခင်းများနှင့်မယုံနိုင်စရာတစ်ပိုလျှံ ခရီးစဉ် မှာ gawk မှ.
မီးရထားခရီးသွားလာဝေးနေဖြင့်ဥရောပတစ်ဝှမ်းရဖို့အရှိဆုံးသာယာလှပခြင်းနှင့်အဆင်ပြေနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, နှင့်စစ်မှန်စွာသငျ့စိတျမှုတ်လိမ့်မည်ဟုအချို့သောလမ်းကြောင်းရှိပါတယ်, အထူးသဖြင့်နေစဉ်အတွင်း နွေရာသီ!
အကောင်းဆုံးဥရောပရထားလမ်းကြောင်းများ: ရထား des Pignes, ပြင်သစ်
အဆိုပါ Eurostar နှင့်အခြားရထားလိုင်းများကိုပိုမိုမကြာခဏန်ဆောင်မှုမိတ်ဆက်. နှင့် ဟိုတယ်များ Off-အထွတ်အထိပ်နှုန်းထားများမှာကြိုဆိုဧည့်သည်များ. သင်တစ်ဦးသောက်စရာများနှင့်ပြင်ပရှိတောင်မုန့်ညက်ရှိသည်နိုင်သည့်အခါဘုန်းကြီးသောနေသာရက်ပေါင်းရှိပါတယ်.
ဒီပုဂ္ဂလိကမီးရထားရှာဖွေတွေ့ရှိ, သောဖြတ်သန်း အလှဆုံး ပြင်သစ်တွင်ဒေသများ. Provence ၎င်း၏သဘာဝနှင့်ပါရှုခင်းများကျော်ကြားသည်, အဆိုပါခရီးစဉ်ကိုအမှန်ပင်အကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်, ယူဖို့အကောင်းဆုံးဥရောပရထားလမ်းကြောင်းများနှင့်ဆက်ဆက်တဦးတည်း! ၎င်း၏လမ်းတွင် ရထားမြစ်များကိုဖြတ်သန်း, တံတားများ, ၎င်း၏နောက်ဆုံးခရီးလမ်းဆုံးသည်အထိစိန့်အန်ဒ Les Alpes နှင့် Entrevaux တူသောအသေးစားအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကျေးရွာပေါင်း - Digne Les Bain - Alpes-de-Haute-Provence ဒေသ၏မြို့တော်.
ခရီးစဉ်: Nice-Digne les Bains
ရှည်ကြာခြင်း:3နာရီ, 145 ကီလိုမီတာ
ဘယ်အချိန်မှာသွားကြဖို့: နွေဦး, နွေရာသီ, ကျ
အကောင်းဆုံးဥရောပရထားလမ်းကြောင်းများ: အနောက်နိုင်ငံတွေရိုင်းမီးရထား, ဂျာမနီ
အဆိုပါရိုင်းမသာဥရောပရဲ့အလှဆုံးမြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်လည်းတိုက်ကြီးရဲ့အရေးအပါဆုံးရေလမ်းတစ်ဦးရဲ့. ဒါဟာအချို့စီးဆင်း 1,320 ကီလိုမီတာကနေ ဆွစ်ဇာလန် နယ်သာလန်နှင့်မြောက်ပင်လယ်မှအပေါင်းတို့သည်လမ်း. ဒီအားကြီးသောမြစ်၏အများဆုံးဆွဲဆောင်အပိုင်းတစ်ခုမှာဂျာမဏီရဲ့အလယျပိုငျးရိုင်းချိုင့်မှတဆင့်စီးဆင်း (Rheintal), ထူးချွန်သဘာဝအလှအပတစ်ခုဧရိယာ. တကယ်တော့, မြစ်၏လမ်းပိုင်းမှတောင်ဘက်တွင် Mannheim ကနေတိုးချဲ့ Koblenz မြောက်ဘက်တွင်ကြီးမားသောအပိုင်းကြောင်းရှုခင်းဒါအံ့မခန်းဂုဏ်ယူ, အဆိုပါအဖြစ်ရည်ညွှန်း ရိုင်းတွင်ရှိသော (Rheinschlucht), သတ်မှတ်ထားသောထားပြီး ယူနက်စကိုရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်များ.
ယင်း၏အများအပြားမှကျေးဇူးတင်ပါသည် ရဲတိုက် နှင့်သမိုင်းဝင်မြို့ရွာ, အဆိုပါရိုင်း၏ဤလမ်းပိုင်းရာစုနှစ်အနုပညာရှင်တွေသြဇာလွှမ်းမိုးမှုထားပါတယ်, စာရေးဆရာများ, နှင့်တေးရေး, နှင့်ဆက်ဆက်နွေရာသီရာသီအတွင်းအကောင်းဆုံးဥရောပရထားလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
ရထားမြစ်ရိုင်းတလျှောက်သွားသည်နှင့်များ၏ပါက်ဘ်ဆိုက်များမှထုတ်ဖော်ပြသ ဂျာမနီ. အတူကျောက်တောင်စောင်း စပျစ်ဥယျာဉ်, သူတို့ထဲကထိပ်ပေါ်မှာဟောင်းရဲတိုက် - သင်ရထားချွတ်ရနိုင်နှင့် အလည်အပတ် စိန့်အတွက်ဒဏ္ဍာရီ Lorelei ရော့ခ်. Goarshausen, အရာထ 120 အဆိုပါရိုင်းအထက်မီတာ. တစ်ဦးကယ့်ကိုကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်း, ထိုအဆင်းလှဂျာမန်မြို့ကြီးများအတွက်ခရီးသွားလာနေစဉ်.
ရှည်ကြာခြင်း: 185 ကီလိုမီတာ
ဘယ်အချိန်မှာသွားကြဖို့: နွေရာသီ, ကျ
Cologne Bonn မှရထား
Koblenz ရထားမှ Bonn
Koblenz Bingen မှရထား
Frankfurt ရထားမှ Bingen
အဆိုပါ Rauma မီးရထား, နော်ဝေ
အဆိုပါ Rauma မီးရထားကိုပိုမိုနှင့်အကြားပိုပြီးရေပန်းစားဖြစ်လာ ခရီးသွားဧည့်, ဒါဟာနွေဦးအတွက်အကောင်းဆုံးဥရောပရထားလမ်းကြောင်းများထဲကတစ်ခုဖြစ်လာအဖြစ်. ဒီရထားလမ်းပေါ်တွင်တစ်ဦးကခရီးစဉ် Andalsnes နှင့် Dombas အကြားအံ့မခန်းသဘောသဘာဝရန်သင့်အားအနီးကပ်ဆောင်တတ်၏.
Dombas နှင့် Andalsnes အကြားအဆိုပါခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ် 114 ကီလိုမီတာရှည်လျားကြာ 1 နာရီနှင့် 40 မိနစ်များ. အဆိုပါမီးရထား 'passes 32 တံတားများ – နာမည်ကျော် Kylling တံတားအပါအဝင်, 59 အဆိုပါ Rauma မြစ်အထက်မီတာ – နှင့်ဖြတ်သန်း6ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း. ရထားပြတင်းပေါက်ကိုရှိပါတယ်, သငျသညျကျောအမှီနှင့်ခံစားရန်ခွင့်ပြု ခမ်းနားရှုခင်း. ရထားလည်းကျော်ကြား Trollveggen အတိတ်ဝင် – အဆိုပါ trolls မြို့ရိုးကို, ဥရောပရဲ့အမြင့်ဆုံး perpendicular သောတောင်ပေါ်မြို့ရိုးကို.
နွေဦးမယ့် start ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်. ရထားလှပသောရှုခင်းကတဆင့်အထူးသဖြင့်နှေးကွေးပြေး. ဒါဟာ Kylling တံတားမှာနှင့် trolls မြို့ရိုးနားမှာဓါတ်ပုံတွေကိုအဘို့အရပ်, တစ်ဦးလမ်းညွှန်စပီကာမှတဆင့်သင်ကသတင်းအချက်အလက်ပေးတော်မူမည်, သငျတို့သညျလညျးခရီး၏ပျေါလှငျအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူလက်ကမ်းစာစောင်ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်.
ရှည်ကြာခြင်း: 1.5 နာရီ, 114 ကီလိုမီတာ
Bernina Express ကို, အီတလီနိုင်ငံမှဆွစ်ဇာလန်
အဆိုပါ Crossing အဲလ်ပ်တောင်တန်း အဆိုပါ Bernina Express ကိုအတွက်ဆက်ဆက်ဥရောပသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးဥရောပရထားလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်! လမ်းတစ်လျှောက်, အဆိုပါ Bernina Express ကို 65 မီတာမြင့်မားသော Landwasser Viaduct ကျော်ဟောလိဝုဒ်စတိုင်မိတ်ဆက်, အဆိုပါ Rhaetian မီးရထား၏လက်မှတ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် site ကို.
စုစုပေါင်းရထားဖြတ်သန်း 55 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း နှင့်ကျော် 196 Chur ထံမှ Tirano ရန်၎င်း၏လမ်းအပေါ်တံတားများ. ခရီးသွားများအတွက်သူတို့၏ကာလအတွင်းအံ့ဘွယ်သောမြင်ကွင်းများမှကုသနေကြ ခရီးသွားခြင်း, အဆိုပါ Bernina massif တစ်ဦးအမြင်အတူ Montebello ကွေးနဲ့တူ, အဆိုပါ Morteratsch ရေခဲမြစ်, ထိုသုံးဦး ရေကန်များ Pitschen lej, Lej Nair နှင့်အဖြူရောင်ရေကန်, အဆိုပါ ALP Grum နှင့် Brusio မြို့ပတ် Viaduct. နွေရာသီမှာ, ခရီးဟာ Bernina Express ကိုဘတ်စ်ကားတစ်စီး Tirano ထံမှ Lugano တိုးချဲ့နိုင်ပါသည်.
ရှည်ကြာခြင်း:4နာရီ, 123 ကီလိုမီတာ
Thusis ရထားမှ Chur
အကောင်းဆုံးဥရောပရထားလမ်းကြောင်းသို့နွေဦးပေါက်ဖို့အဆင်သင့်? တစ်ဦးကရထား Save သငျသညျကိုကူညီနိုငျ, NO ဝှက်ထားသောအခကြေးငွေနှင့်အတူမြန်ဆန်လွယ်ကူသောဘွတ်ကင်နှင့်အတူ! အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးလေပြေ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-european-train-routes/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ပန်းချီဆရာ europetravel longtrainjourneys နွေရာသီ ရထားအကြံပေးချက်များ